Screen recorder - Myanmar - Mi Community - Xiaomi
Miui 12 don't have screen recoder.How I get it?
miui မှာ default အနေနဲ့ screen recorder ပါဝင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် tools folder ထဲမှာရှိတတ်ပါတယ်။ မတွေ့ခဲ့ရင် miui ရဲ့ search panel ကနေ screen recorder ကိုရှာကြည့်ပါ။ ဒါမှ မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း အပြင်ကနေထပ်သွင်းလို့ရပါတယ်။ ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။
You can see screen recoder on MIUI 12 contro center.
Screenshot_2020-12-02-20-39-54-627_com.mi.global.bbs.jpg (354.14 KB, Downloads: 9)
2020-12-02 22:18:33 Upload
If your device don`t have screen recoder.You can download link